पाँच वर्षभित्र डियरवाकले १ हजारलाई रोजगारी दिनेछ : रुद्र पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष, डियरवाक इन्क
Sunday, 26 February 2012 08:22	नागरिक
केही महिनाअघि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली उद्यमी रुद्र पाण्डेको प्रशंसा गरे। नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा ११ वर्षदेखि अनवरत सक्रिय पाण्डेले सयौंलाई विदेशीले पाउनेसरह सुविधा साथ रोजगारी दिएका छन्। नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउने अभियानमा लागेका पाण्डेले दुई वर्षअघि चर्चित कम्पनी डिटुहकआई बिक्री गरे अमेरिकीलाई। अमेरिकीसँग साझेदारीमा खोलिएको त्यो कम्पनी नौ वर्ष चलाएपछि उनले राम्रै मूल्यमा बेचेका थिए। धेरैलाई लाग्यो त्यसबाट आएको ठूलो रकमबाट पाण्डेले अमेरिकामै मोजमस्ती गर्ने भए। तर उनले त्यो रकमलाई डियरवाक नाम गरेको आइटीको आउटसोर्सिङ कम्पनी र त्यही नामको कलेजमार्फत नेपालमै लगानी गरिरहेका छन्।
नेपालमा आइटी पढाई हुने कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनै गर्न नसकेको पाण्डे बताउँछन्। अहिले डेढ सय जना इन्जिनियरले काम गरिरहेको डियरवाकलाई आउँदो ५ वर्षभित्र एक हजारले काम गर्ने थलो बनाउने अभियानमा पाण्डे छन्। अहिले पनि आइप्याड र आइफोनका लागि एप्लिकेसनहरु बनाउने काममा सक्रिय यो कम्पनीले स्वास्थको क्षेत्रमा बनाएको सफ्टवेयरले अमेरिकामा ठूलो बजार लिएको छ।
अमेरिकाको बोस्टनमा बस्ने पाण्डे हरेक ३/४ महिनामा नेपाल आइरहन्छन्। सन् १९६३ मा धादिङको नौबिसेमा जन्मेका पाण्डे सन् १९८४ पाकिस्तानमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दापढ्दै इलेक्ट्रोनिक्स तिर सरे। नेपाल फर्केर तत्कालिन राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र, नेपाल टेलिकम, नास्ट, विश्व बैंक लगायतका निकायमा काम गरेका पाण्डे अध्ययनको क्रममा अमेरिका पुगेपछि आइटीमा लागे। पाण्डेले यसपटक नेपाल आएको समयमा नागरिकका रामचन्द्र भट्टलाई थुप्रै उत्साहजनक योजना सुनाए।
नेपालमा सूचना प्रविधिको लागि डियरवाकले के गर्दैछ?
डियरवाक खासमा सफ्टवर कम्पनी हो। यस क्रममा सफ्टवरको निर्माणसँगै दक्ष जनशक्तिको विकासमा हामी काम गरिरहेका छौं। हामीसँग काम गर्दागर्दै मान्छेले सिक्ने र सँगै त्यो सीप अनुसार विदेशमा समेत राम्रो काम पाइरहेका छन्। मेरो विचारमा मान्छे बाहिर जानु नराम्रो होइन। बाहिर गएपछि सीप र पैसा दुवै नेपालमा भित्रिन्छ। हामीले देखिरहेका छौं, केही वर्ष अघिसम्म भारतबाट धेरै मान्छेहरु विदेश गए। अहिले त्यहाँको वातावरण बन्ने बित्तिकै ती सबै भारत फर्केर आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन्। चिनियाहरुको पनि त्यही छ। हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था अहिले छ। मसँग डिटुहकआईमा काम गरेका सबैले अमेरिकामा राम्रो काम पाएका छन्। उनीहरुले संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि काम पाउने अवस्था छ। अहिले सानो रुपमा भएपनि ४/५ सयले निकै राम्रो पारिश्रमिक सहितको रोजगारी पाउँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पुर्‍याएको छ।
रोजगारी सिर्जनामा अझै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न के गर्नुपर्ला?
अधिकांश आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेर वेवसाइट बनाउने काम ल्याइरहेका छन नेपालमा। प्रविधिको विकासको लागि सुरुमै हामीलाई नपत्याउन सक्छन्। त्यसको लागि स्थानीय क्रेताहरु हुनुपर्थ्याे नि। अहिलेसम्म स्थानीय क्रेताहरु नै छैनन्। सरकारले किन्ने सफ्टवयरहरुमा पनि विदेशीकै बोलवाला छ। विदेशी कम्पनीलाई पत्याउने तर नेपालीलाई नपत्याउने प्रवृत्ति छ। हामी विदेशीलाई चित्त बुझ्नेगरि काम गरिरहेका छौं भने नेपालमा नसक्ने भन्ने कुरै होइन। हामीले अहिले जुन तरिकाबाट आउटसोर्सिङ गरिरहेका छौं यस्तोबाट हुँदै हुँदैन।
भनेपछि पहिला तपाईहरुले बनाएको सफ्टवयरको प्रयोगकर्ता सरकार बनिदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो होइन त?
यथार्थ त्यही हो। सरकारले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको लागि प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ। जसले गर्दा कसैले पनि बदमासी गर्न नसकोस्। सरकारी निकायमा बसेकाहरुसँग यस्तो सोचाई छ कि, स्थानीय सफ्टवर बनाउनेलाई काम दियो भने ठग्छन्, गतिलो काम गर्दैनन्। त्यस्तो होइन, सरकारी निकायले कडा शर्त राखेर खरिद गर्ने, शर्त अनुसारको दिन नसक्ने, गुणस्तरहिन सफ्टवयर दिनेलाई जेल पठाउनु नि अनि कसैले बदमासी गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले नै पहिला हामीलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो, तबमात्र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बढाउन सक्छौं।
नेपालीले पहिलो त समयमा दिँदैनन, अर्को काम पनि राम्रो गर्दैनन भनिन्छ नि?
त्यही भएर कडा शर्त र प्रावधान राख्नुपर्‍यो नि। १० करोडको काम छ भने एक करोड धरौटी माग्न सकिन्छ। अनि कसले झारा तिर्नेगरि काम गर्छ? विदेशीलाई दिँदा हामीले समयमा गरिराख्या छौं भने नेपालमा नसक्ने भन्ने कुरै होइन। बरु सरकारी निकायले नेपालीलाई विश्वास गदैैनन्, घुस खान खोज्ने, दुःख दिने प्रवृत्ति ज्यादा छ।
सूचना प्रविधिलाई सरकारले तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा लिएको छ। तपाई यही क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
सरकारले सूचना प्रविधिको विकासका निम्ति पहिलो गर्नुपर्ने भनेको शिक्षामा नियमन हो। अहिले छ्यासछ्यास्ती खुलेका आइटी कलेजले यो क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय जनशक्ति दिन सकेका छैनन्। विद्यार्थीहरुले पनि सिकेको कुरा प्रयोग गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्। सरकारले सहर सफा राख्ने, बिजुलीको व्यवस्था गर्नसक्ने हो भने यहाँ थप लगानी हुने अवस्था छ। सुरक्षा पनि प्रमुख विषय बनेको छ। कानुनको शासन छैन। सुरक्षा चाहिहाल्यो भने पुलिसलाई फोन गरेपनि केही हुँदैन, कसैलाई भन्यो भनेपनि केही हुनेवाला छैन। यो अवस्था सुधार हुन आवश्यक छ। सहर सफा भयो भने, पूर्वाधार हुने र शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुने हो भने लगानीकर्ताहरु आफसेआफ आउँछन्। काठमाडौंको फोहोरले गर्दा स्थिति कस्तो बनिसक्यो भने मानिसहरु एक दिनपनि यहाँ बस्न चाहँदैनन्। यी कुराहरु सुधार गर्ने हो भने अरु ठूलो केही गर्न पर्दैन। सरकारले नेपाली उद्यमीलाई विश्वास गर्ने हो भने हामी धेरै गर्न सक्छौं।
सूचना प्रविधि र आउटसोर्सिङबाट हामी साँच्चिकै धनी बन्छौं त?
पक्कै सक्छौं। सरकारले तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेर त राख्यो तर केही नयाँ काम गरेजस्तो मैले अनुभव गरेको छैन। यो क्षेत्रमा लागिराखेका हामीसँग कुरा नै भएको छैन। कम्प्युटर एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने निकायसँग समेत 'भिजन' छैन।
धेरैले सूचना प्रविधिको विकासको अवरोधकको रुपमा ऊर्जालाई लिइरहेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ?
ऊर्जा ठूलो कुरा होइन। जेनेरेटर राखेर पनि काम चलाउन सकिन्छ। मुख्य कुरा सहरको वातावरण र शान्ति सुरक्षा हो। बस्नलाई मन पर्नेगरि सफा सुन्दर भयो भने मानिसहरु उसै आकर्षित हुन्छन्। मसँग काम गर्ने विदेशी इन्जिनियरहरु सधैंभरि यस्तो फोहोर ठाउँमा के बस्नु भन्दै गुनासो गरिरहन्छन्। मेरो आग्रह बरु कर लगाएर भएपनि सहर सफा चिटिक्कको राखिदेउ भन्ने हो।
तपाई अमेरिकामा समेत स्थापित भइसक्नु भएको छ। नेपालमै लगानी गर्नुको उद्देश्य के हो?
अमेरिकामा हार्डवयर एकदमै महँगो हुन्छ। ती सबै विदेशमा बनाइन्छ। भारत, रसिया, नेपाल, चीन लगायत अरु देशबाट यस्ता चिजहरु बनाएर ल्याइन्छ। मैले नेपालमा व्यवसाय गर्नुको कारण सबैले मलाई यहाँ चिन्छन्, केही समस्या परिहाल्यो भने पनि समाधान गर्न सक्छु। यहाँको वातावरण बिग्रियो भने अरु लगानीकर्ता जस्तै म पनि बाहिरिन सक्छु।
सरकारले के गरिदियो भने यस्तो काम अझ नेपालमा आउने सम्भावना छ त?
आउटसोर्सिङ, बिपिओमा सरकारले केही गर्नुपर्र्दैन वातावरण हुने हो भने व्यवसायी आफैंले गर्छन। सरकारले सुरक्षा, सफा सुन्दर वातावरण, उपयुक्त शिक्षा दिने वातावरण हुने हो भने धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ। व्यवसायीहरु आफसे आफ आउँछन्।
आइटी शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। के खत्तमै हो त नेपालको शिक्षा?
गतिलो भएको भएत केही जान्नुपर्ने नि? पढाई सकेर हामीकहाँ कामको लागि आएकाहरु केही जान्नुपर्ने नि? अरु देशमा अध्ययनको बीचमा हरेक वर्ष तीन महिना छुट्टी हुन्छ। त्यो समयमा काम गर्न सक्छन्। चार वर्षको अवधिमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुन्छ नि। त्यसले गर्दा अध्ययन सकिने बित्तिकै काम पाउने सम्भावना हुन्छ। यहाँ खोई? चार वर्षको कोर्स पाँच वर्षमा पनि नसकिने अवस्था छ। राम्रो पढ्नेहरु यहाँ चाहदैनन्। कोर्स गुणस्तरीय छैन भन्न खोजेको होइन त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने वातावरण छैन।
त्यही भएर तपाईले कलेज पनि खोल्नु भएको हो?
हो। मैले कलेज खोल्नुको कारण सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सीप एकै पटक दिनको लागि हो। तर शिक्षामा पनि चर्को राजनीतिको शिकार म भइसके। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सम्बन्धन लिन खोजेको सबैका आफ्नै कलेज रहेछन्, दिनै नमान्ने। डिनदेखि लिएर तलसम्मका सबैको आफ्नै कलेज भएपछि दिएनन्। त्रिबिबाट सम्बन्धन लिएर पढाई सञ्चालन गरिरहेको छु। यो निकै पीडाको विषय हो। तर म डराएको छैन। म नेपालमा केही गर्न चाहन्छु। हिलो भयो भने हिलोमै मुछिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छु।
सपना के देख्नु भएको छ?
डियरवाकलाई एक हजार इन्जिनियरले एकै पटक काम गर्ने संस्था बनाउने। त्यसपछि मैले केही गरेको जस्तो त्यतिखेरमात्र महसुस गर्नेछु। अहिले डेढ सय जनाले काम गर्दैछन्। पाँच वर्षभित्र एक हजार जनाले यहाँ काम गर्ने अवस्था बनाउँदैछु।
यो क्षेत्रको समस्या के हो?
नेपाल भनेपछि अहिलेपनि विदेशमा सितिमिति विश्वास गर्दैनन्। अफिस कहाँ छ भनेर सोध्छन्। नेपालमा भन्ने बित्तिकै मुख बिगार्छन। तिनैले भारतमा अफिस छ भन्ने बित्तिकै दुई हात उफ्रेर काम दिन्छन्। हामीले सूचना प्रविधिमा भारतको जस्तै इमेज बनाउनु छ। म नेपाल र नेपालीलाई सूचना प्रविधिको ब्राण्ड बनाउन लागिरहेको छु।
नेपाललाई ब्राण्ड बनाउन कसले के गरिदिने त?
राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा, सफा सहर बनाइदिने हो भने यो क्षेत्रको लागि अरु केही गर्नुपर्दैन। सबै अनुशासित हुने हो भने यो क्षेत्रमा हामी नेपाललाई चिनाउन धेरै गर्न सक्छौं।
All the best Rudra sir.
Good, Keep it up, don't loose your patience.
बरु सरकारी निकायले नेपालीलाई विश्वास (गर्न नखोज्ने, घुस नखाई केहि नगर्ने र) दुःख दिने प्रवृत्ति ज्यादा छ।
(सरकार, सूचना प्रविधि मन्त्रालय), कम्प्युटर एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने निकामा समेत 'भिजन' (भएको मान्छे नै) छैन।
very good news reach ur destination. thanksalot sir.
Narendra Raj Ghale
गफ मात्र गर्ने अनि काम नगर्ने जनशक्ति मार्केट बाट हट्नुपर्छ सबै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन पाण्डे सरले गर्नुभएको छ
good news to all the software developers
go on pandeji
Pharendra Thapa Magar
Really! Really i'm inspired by these article.
All the best Rudra sir
great thoughts and great work!!
The new and inspiring thought. i believe that success will soon start to follow you rather you follow the success. all obstacles will be easily clear from your path. Please keep continue.
The new and inspiring action. I believe that success will start to follow you rather you follow the success.
Please keep continue, all obstacles will remove from your path.